Madaxweyne Deni oo ka baaqday safarkii Kismaayo uu maanta ku tegi lahaa - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Madaxweyne Deni oo ka baaqday safarkii Kismaayo uu maanta ku tegi lahaa
October 9, 2019 at 15:12 Madaxweyne Deni oo ka baaqday safarkii Kismaayo uu maanta ku tegi lahaa2019-10-09T15:12:36+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Madaxweynaha dowladda Puntland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa sabab aan weli la shaacin uga baaqday safar ay maanta ku tegi lahaayeen magaalada Kismaayo, halkaasoo lagu wado in maalinta berrito ah lagu qabto caleemo saarka Axmed Madoobe.
Ka hor baaqashada madaxweyne Deni iyo wagdigiisa, waxaa warbaahinta Jubbaland ay shaacinaysay in wafdiga Puntland laga sugayay garoonka Kismaayo, halkaasoo loogu diyaariyay soo dhoweyn balaaran.
Madaxweyne Deni oo Bosaso kasoo duulay maanta barqadii, ayay mar qura warbaahintu ka war heshay isagoo kasoo dagaya garoonka diyaaradaha ee Garowe, waxaana sarakiil PuntlandPost la xidhiidhtay ay sheegeen in madaxweynuhu beri tagayo.
Saraakiil katirsan xafiiska madaxweynaha oo aan la xidhiidnay, ayaa ku gaabsaday in madaxweynaha iyo wafdi kasii raacaya Garowe ay berrito aroortii ku wajahan yihiin Kismaayo.
Warbaahinta qaar ayaa tebinaysa in safarka madaxwyenuhu u baaqday sababo la xiriira garoonka Kismaayo oo aan laga degi karin waqti habeen ah, hase yeeshee warbaahinta Puntland Post warkaas xaqiiqo uma hayso.
Ma jirto culays madaxweyne Deni iyo wafdigiisa ka saaran inay Kismaayo u safraan, hase yeeshee cilado farsamo oo aan weli dowladdu shaacin ayaa keentay baaqashada wafuuda Puntland.
Maxkamada sare ee Soomaaliya ayaa laashay cadaadiskii xagga safarka ee ay dowladdu federalku kusoo rogtay duulimaadka Kismaayo, waxaana lagu wadaa in magaalada Muqdisho ka tagaan siyaasiyiin horey loo xannibay.
« Villa Somalia oo dhex fariisatay mowjado musuq maasuq ah
Berbatov oo soo jeediyay xal uu aaminsan yahay in lagu yareen karo loolanka u dhexeeya Ronaldo iyo Messi »